Ny hoavy amin'ny fitantanana miorim-paka amin'ny toeram-piompiana voajanahary Reef Resilience
Ny hoavin'ny fitantanana miorim-paka amin'ny toeram-piompiana voajanahary
Ity lahatsoratra ity no manamarika ny mety hisian'ny fitantanana maharitra (RBM) hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina amin'ny ho avy ary manasongadina ireo fahafaha-manao sy fanamby atrehan'ny tetik'asa fitantanana RBM. Ny mpanoratra dia mamaritra ny RBM ho toy ny "Mampiasa fahalalana momba ireo mpamily ankehitriny sy ho avy izay misy fiantraikany eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana (ohatra: ny fahasimban'ny aretina, ny fiovana amin'ny fampiasana ny tany, ny varotra na ny fomba fanjonoana) mba hampahafantarana sy hampihatra ary hampifanarahana ny hetsika fitantanana izay manohana ny tontolo iainana "Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny RBM, ny fitantanana mahazatra ny vatohara, ary ny fitantanana ny tontolo iainana (EBM) dia asongadina ao amin'ilay lahatsoratra. Raha mitovy amin'ny EBM ny RBM, ny RBM dia manantitrantitra ny anjara andraikitry ny olona amin'ny fiovan'ny fiara, ny fampifanarahana, ary indrindra ny fanovana, izay ekena ho toerana manan-danja amin'ny rafitra marefo. Mba hanombanana ny sahan-dalan'ny RBM hanampiana ny hanohanana ny haran-dranomasina, ireo mpanoratra dia mamaritra ny tanjon'ny RBM ho: 1) ny fitantanana ny tontolo iainana ara-tontolo iainana hanohanana ny fahasalaman'ny olombelona; 2) mitantana fiovana goavana, tsy fahatokisana, ary mahagaga; 3) mamolavola fanovàna mba hanohanana ireo fananana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ary hampihatra ny fitantanana fitantanana; 4) mihazona ny fanovana, ny fahasamihafana ary ny fahamendrehana; ary 5) mampiditra ny olombelona amin'ny ecosystems mba hampiova ny fanovana, ny fampifanarahana ary ny fanovana eo amin'ny rafitra sosialy-ekolojika. Ity taratasy ity dia manamarina ny porofo momba ny fampiharana ny RBM, manasongadina ireo fanamby fototra, mamantatra ny filàna fikarohana, ary manome toro-marika ho an'ny mpitantana ny vatohara. Amin'ny ankapobeny, ireo tolo-kevitra momba ny fitantanana ny RBM dia nasongadina: 1) miaro ny karazana karazana, toeram-ponenana ary vondron'olona; 2) ny fitohizan'ny fifandraisana; 3) mampihena ny tsindry amin'ny haran-dranomasina; 4) mametraka MPA ho fanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina; 5) mitantana amin'ny fomba ahafahana mampifanaraka ny tsy fahazoana antoka sy ny fiovana; 6) dia manome laharam-pahamehana ireo faritra manana risika anaty tontolo iainana sy ny fahaiza-manao ara-tsosialy; 7) dia mampita famantarana ara-tsosialy sy ara-toekarena mba handinihana ny fampitandremana mialoha, ny famerenana amin'ny laoniny, ary ny fanodikodinan'ny fitondrana amin'ny fandrindrana sy ny fanaraha-maso ny fiarovana; 8) mampiasa vola amin'ny fomba fanandramana hanohanana ny faharetana; 9) manatanteraka paikady hanatsarana ny fahaiza-manaony ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana; ary 10) manatanteraka paikady hanatsarana ny fanovana sy ny fanovana. Ny mpanoratra dia nanamafy fa ny tetik'asa fitantanana ny haran-dranomasina dia mila fandraisana an-tsitrapo roa na vaovao izay mampiroborobo ny sosialy ara-sosialy sy ara-tontolo iainana ho an'ny RBM mba hahomby amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Mpanoratra: Mcleod, E., KRN Anthony, PJ Mumby, J. Maynard, R. Beeden, NAJ Graham, SF Heron, O. Hoegh-Guldberg, S. Jupiter, P. MacGowan, S. Mangubhai, N. Marshall, PA Marshall, TR McClanahan, K. Mcleod, M. Nyström, D. Obura, B. Parker, HP Possingham, RV Salm, ary J. Tamelander